Barataan Yunvarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo sirna eebba barattootarratti \_'\_'Jawaar Mahaammad hiikaa, hidhamtoota siyaasaa hiikaa,\_'\_' jechuun waltajjiirratti dubbate, qaama hidhate waliin hariiroo qaba jedhamuun shakkamee hidhame jedhe abukaatoon isaa.Haala akkamii keessa jira? kan jedhuuf waan "BBC" iyyaafanne kunooti. https://bbc.in/3urGPCS
Post Likes Profile Umar Abdurroo
Umar Abdurroo 4d ago
Barataan Yunvarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo sirna eebba barattootarratti ''Jawaar Mahaammad hiikaa, hidhamtoota siyaasaa hiikaa,'' jechuun waltajjiirratti dubbate, qaama hidhate waliin hariiroo qaba jedhamuun shakkamee hidhame jedhe abukaatoon isaa.
Haala akkamii keessa jira? kan jedhuuf waan "BBC" iyyaafanne kunooti.
Barataan Yunavarsiitii Jimmaa ''Jawaar hiikaa'' jedhe maaliin shakkame? - BBC News Afaan Oromoo
Barataan Yuunvarsiitii Jimmaa Mohaammad Deeksisoo sirna eebba barattoota irratti ''Jawaar Mahaammad hiika, hidhamtoota siyaasaa hiikaa'' jechuun wal tajjii irratti dubbate, qaama hidhate waliin hariiroo qaba jedhamuun shakkamee hidhame jedhan abukaatoon isaa.